I-B & B eduze neQuattro Canti - Palermo
Umkhathi oyingqayizivele futhi wamukelwa enhliziyweni kaPalermo
5.0 /5 amavoti (amavoti angama-19)
B & B eduze ne Izingoma Ezine a Palermo indawo yokuhlala indawo yokuphonsa itshe kusuka I-Cattedrale okuzokwenza ukuhlala kwakho kukhumbuleke.
I-B & B - Isakhiwo sokuqala nesamukelekayo sokujikijela itshe kusuka kubuciko namasiko
B & B kungukuthi umbhede nokudla kwasekuseni etholakala enhliziyweni yedolobha Palermo eduze ne Izingoma Ezine nokujikijela kwetshe kusuka kubukhazikhazi Isonto lesonto lama-Arab-Norman okuyingxenye ye Isiza Samagugu Womhlaba Wonke we-Unesco kusukela ngo-2015. Kulesi sakhiwo uzofakwa ngokuphelele emoyeni ogcwele ubuciko, umlando namasiko. Uzobingelelwa ngobungane namandla obuhlakani babanikazi abesebenze le bhizinisi lomndeni iminyaka ngentshiseko nokuzinikela.
I-B & B eduze neQuattro Canti - amakamelo anethezekile nezindawo zokudla kwasekuseni ezimnandi
Isakhiwo B & B ibonakala ngokududuza kwamakamelo ayo, konke kufakwe yindlu yangasese yangasese, umoya opholile, i-TV, ifriji. Abanye banamakholomu abheke iCorso Vittorio Emanuele lapho ungaphefumula khona ngokuqina komuzi wedolobha. Uzophila umuzwa wokunambitheka okukhulu njalo ekuseni ngokubonga isidlo sasekuseni esiningi esinikeza bonke ubuhle obujwayelekile besidlo sasekuseni saseMedithera nesaseSicily ngaphandle kokunganaki okunye kokudla okuvamile kwesidlo sasekuseni sezwekazi esifana nesando, ushizi kanye nopayi obabayo.
I-B & B - Ukuhlonipha, ukusebenza kahle kanye nezinsizakalo eziningi zabasebenzisi
I-B & B eduze neQuattro Canti iyakwazi ukukunikeza uchungechunge lonke lwezinsizakalo ezingezekile ezizokwenza iholidi lakho noma ibhizinisi lihlale lijabulisa kakhulu futhi liheha. Izinsizakalo ezinjengama-Guided Tours noma ama-Electric Bike Tours ayatholakala ngesicelo esizokuvumela ukuthi ubheke idolobha kusukela ekubukeni okusha futhi ujabulele bonke ubuhle bawo. Ngaphezu kokuhlinzeka yokupaka ngaphakathi kwesakhiwo, abasebenzi bazozama ukwanelisa isifiso sakho sonke, bamukele futhi balandele izivakashi ngobungcweti obukhulu kuzo zombili iziNtaliyane nesiNgisi.
I-B & B eduze neQuattro Canti - Isimo esikhethekile esingu-360 °
Ukusondela ngokweqile kwe B & B kuya ezokuvakasha eziphambili zedolobha kwenza kube yindawo ekahle ukubhekelwa kuyo njengendawo yokubhekela nayo izivakashi ezihambela wena uqobo. Lapho I-Cattedrale itholakala ngamamitha angama-300 ukusuka kule mpahla. Okuphilayo impela kusondele kakhulu Nge-Maqueda, elenza isikhundla se- "B&B" sibe namandla angenakuqhathaniswa, sikunike ithuba lokuthi uzithole usucwilisiwe emizileni eyinhloko yabavakashi ngokushesha nje lapho uphuma esakhiweni. Kusizakale ngokucela izeluleko kubaninizo abazophakamisa izindawo nezindawo ezingavamile kakhulu ukunambitha amakhono amahle kakhulu edolobha.